Waraysiyada | somaanta
Cabdiraxmaan Muuse oo ka warbixinaya waxqabadka Heyádda Ibn Rushd
Cabdiraxmaan Jaamac Muuse, waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka howlgala heyádda Ibn Rushd (Studieförbund) oo ka shaqeysa adeegyada kala duwan ee bulshada, gaar ahaan dhinacyada kor uqaadidda waxbarashada, xirfadda shakhsiyeed iyo tan bulsho, waxaana la yeelannay waraysi si ay bulsho-weynta Soomaaliyeed wax uga ogaato howlaha heyáddaani iyo waxyaabaha ay ka caawin karto ururada ay leeyihiin Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalalka dibedda.
Cadiraxmaan waxa uu ku dhashay magaalo madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqadisho , isagoo waxbarashadiisa heer jaamacadeed ku soo qaatay Jaamacadda Linköping University ee dalka Sweden.
Cabdiraxmaan waa nin furfuran oo dadaal badan isla markaana leh dabeecad wanaagsan oo uu kula socon karo qof kasta oo bulshada ka mid ah, wuxuuna si weyn uga dhex muuqdaa howlaha heyádda Ibn Rushd, isagoo weliba ah shakhsigii ugu horreeyey ee Soomaali ah oo ka howl galay heyáddaas, wuxuuna isku dayaa inuu heyádda ku soo xiro Ururada Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden, isagoo booqashooyin aan kala go´laheyn ku kala bixiya magaalooyinka Soomaalidu degto ee dalka Sweden si uu ugu sharraxo howlaha heyádda Ibn Rushd iyo sida ay uga faaíideysan karaan Soomaalidu.
Waraysi ay dhowaan la yeelatay Cabdiraxmaan shabakadda wararka www.somaanta.com ayaa waxa uu u dhacay sidatan.
Suáal : Heyádda Ibn Rushd ma mid dowli ah baa (governmental) mise waa mid aan dowli aheyn (non-governmental organization)?
Cabdirahman: Hay´adaan waa mid dowli ah, laakiin madax-bannaan. Taas macanaheedu waa hay´ad la shaqeysa dowladda Sweden isla markaan u madaxbannaan shaqadeeda.
Suáal : Faahfaahin guud naga sii waxyaabaha ay qabato heyáddaani?
Cabdirahman: Hay´adaan Ibn rushd waa hay´ad shaqadeedu tahay sidii ay kor ugu qaadi lahayd qofka aqoontiisa gaar ahaaneed iyo midda bulshada uu la noolyahay islamarkaana ah mid ka shaqeysa kor uqaadidda bulshada horumarkeeda.
Suáal : Ibn Rushd ma waxa ay ka howl gashaa Sweden oo keli ah mise?
Cabdirahman: Hay´adaan Ibn Rushd waxay ka mid tahay 9-ka hay ádood ee loo yaqaan (studieförbundet) oo ka howl gala Sweden. Howshooduna ay tahay kobcinta iyo kor uqaadida aqoonta iyo horumarka bulshada mid shaqsi iyo mid guudba. Hay´adahaas waxaa la yiraahdaa afka Swidishka (Studieförbund ), haddii aan u soo noqdo jawaabta suáasha oo kooban Hay´adaan Ibn Rushd waxay ka howlgashaa wadanka Sweden oo keliya.
Suáal : Ma jiraan Ururo Soomaaliyeed oo hoos yimaada Ibn Rushd?
Cabdiraxman: Hay´adaan Ibn Rushd waxay la shaqeysaa ama la shaqeyn kartaa urur kasta oo ka diwaan gashan wadanka Sweden, gaar ahaan ururada ka shaqeeya kor uqaadida dhaqankooda, luqadooda, diintooda iyo fahanka nidaamka wadankan looga dhaqmo.
Ururada Soomalidu waa nala shaqeeyaan qaarkood . Ururada nala shaqeeya waxay ku kala baahsan yihiin wadanka Sweden oo dhan.
Suáal: Ma jiraa qorshe mustaqbalka ay heyáddaani ku caawin karto Soomaalida ku dhaqan qurbaha?
Cabdirahman: Hay´adaan qorshaha ku aadan Soomalida deggan qurbaha hadda kuuma sheegi karo xaaladdaan hadda, laakiin waxaa jirta in hay´adaan Ibn Rusdh ka caawiso Bulshada deggan Sweden sidii ay nolasha aqooneed ee qof kasta xaq u leeyahay in uu kor uqaado ay ka caawiso sidii uu heli lahaa. Iyadoo qofka Soomaaliga ee deggan Sweden uu ka mid yahay bulshada ku nool Sweden, markaa isaga wax waa loo qaban karaa haddii uu qofka Soomaliga ahi diyaar u yahay una soo jeedo fahamka nolosha bulshadaan iyo is-dhexgalkeeda iyo inuu bulshda uu la nool yahay wax ka barto. Nolashiisa gaar ka iyo mid guud wax waa loo qaban karaa. Qofka ayaa la yimaada baahida annaguna waxaan u raadinaa sidii baahdiisa loo dabooli karo.
Suáal: Maxaad jeceshay inaad gaarsiiso akhristayaasha waraysigaan?
Cabdirahman: Waxaan jeclaan lahaa in qofka Soomaliga ahi ee ku nool wadanka Sweden ama wadamada yurub in uu fikirkiisa uu ka badan yahay kan wadankii jooga, tusaale ahaan :
In uu u fikiro sidii uu wadankiisii uu ka soo tegay uu dib ugu celin lahaa xadaaradda iyo aqoonta uu kala kulmey wadanka uu ku nool yahay oo ka mid ah dalalka horumaray.
· Iyo in wadanka uu ku nool yahay uu ka mid noqdo dadka wax ka qabsada xag aqoon iyo xag shaqo labadaba.
Waa in qofku Soomaliga ahi noqdo qof la socon kara bulshada uu la noolyahay, noqdaana danjire (ambasdor) metalaya dadka Soomaliyeed, haddii uu fiicnaado waxa uu kor u qaadey magacii Soomaaliyeed iyo dadkiisii. Haddii uu ka dambeeyo bulashada uu la nool yahayna xagga aqoonta iyo mid la dhaqanba waxa uu noqon mid ka dhiga sawirkii qowmiyadda Soomaliyeed in ay tahay mid aan wax la siiyo mooyee aan wax soosaar lahayn.
Taasna waa midda aan rabno hadaannu nahay shaqaalaha Hay´ada Ibn Rushd in aan ka hortagno, in aan bulshada aan la kala soocin, ayna bulshadu tahay, kuwo siman xagga dhaqan af iyo diinba.
Qofka Soomaaliga ah waxaan kula talinayaa inuu la xiriiro haddii uu rabo wakiilada Ibn Rushd gaar ahaan kuwa afka Soomaliga ku faahamsiin kara waxa uu u baahan yahay iyo sida waxa uu xaq u leeyaahay u raadsan karo, iyadoo ciwaanka heyáddu yahay:
www.ibnrushd.se, Abdirahman Jama Musse +46 7076 990 98 Linköping -sweden.
Waraysigan waxa uu u gaar yahay: www.somaanta.com